तपाईंको घुँडा कतै खिइएको त छैन ? यसरी थाहा पाउन सकिन्छ !! | सुदुरपश्चिम खबर
तपाईंको घुँडा कतै खिइएको त छैन ? यसरी थाहा पाउन सकिन्छ !!
उकालो ओरालो गर्दा तपाईको घुँडा दुख्छ ? धेरै हिँड्दा, टुक्रुक्क बस्दा घुँडा सुन्निने र हिँड्दा गाह्रो महसुस गर्नु भएको छ भने तपाईलाई घुँडा खिइने रोग अर्थात् (ओस्टियो आर्थराइटिस) भएको पनि हुन सक्छ ।
घुँडा खिइने रोग प्रायः ४५ वर्ष उमेर काटेपछि सुरु हुने हाडजोर्नी तथा जोर्नी प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा.सुमनबाबु मरहट्टा बताउँछन् । उनका अनुसार घुँडा खिइएको पहिलो चरणमै थाहा पाउन सकेको खण्डमा निको पार्न सकिन्छ ।
घुँडाभित्र रहेको ‘आर्टिकुलर कार्टिकल’ अर्थात् एक प्रकारको चिल्लो पदार्थ कम भएर घुँडाको दुई हड्डी एकआपसमा घोटिएको अवस्थालाई घुँडा खिइएको भनिन्छ । विशेष गरेर जाडो मौसममा घुँडा दुख्दा चिसोका कारण दुख्यो भनेर बस्ने गरिन्छ । तर त्यस्तालाई घुँडा खिइने रोग लागेको हुन सक्ने भएकाले चनाखो हुन डा.मरहट्टाको सुझाव छ ।
सामान्यतया ४५ वर्ष पूरा भएकाहरुलाई मात्रै घुँडाको रोग लाग्ने गरे पनि पुरानो चोटपटक, जोर्नी संक्रमण, बाथ रोग र रगत सम्बन्धी रोग जस्तै, हेमोफिलिया लगायतका समस्या भएकालाई घुँडा दुख्ने रोग लाग्न सक्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार घुँडा खिइने रोगले सताएको छ भने त्यसलाई सामान्य मान्न हुँदैन । घुँडा खिइने रोगलाई सामान्य मानेर बस्दा अपाङ्गसम्म बनाउने उनको भनाइ छ ।
सिभिल अस्पतालका हाडजोर्नी तथा जोर्नी प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. मरहट्टाले घुँडा खिइने रोगका अवस्थालाई यसरी खुलाए–
शरीरको तौल बढ्न नदिने, स्वस्थ खानपान गर्ने, पलेटी कसेर नबस्ने, घुँडा नखुम्च्याउने, उकालो–ओरालो कम हिँड्ने, नियमित शारीरिक अभ्यास गर्ने, रोग लागिसकेकाले नियमित थेरापी गर्ने, विषेशज्ञको सल्लाहमा मात्रै औषधि सेवन गर्ने गरेमा घुँडा खिइने रोगबाट मुक्ति पाउन सकिने उनले बताए । माया श्रेष्ठले रातोपाटीमा लेखेकी छन्।
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * + 89 = 95